Waaxda Dab-damiska Gobolka Banaadir oo Dib Loo Howlgeliyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Waaxda Dab-damiska Gobolka Banaadir oo Dib Loo Howlgeliyay
Waaxda Dab-damiska Gobolka Banaadir oo Dib Loo Howlgeliyay
Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa la burburay adeegyadii bulshada u ahaa laf-dhabarka sida caafimaadkii, bankiyadii iyo kaabeyashii dhaqaalaha si la mid ah waaxda dab-damiska iyo gurmadka degdegga ah ee Gobolka Banaadir waxay ka mid noqotay adeegyadaas uu buburkii dalka sida aadka ah u saameeyay, waxayna ahayd dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay mid aan shaqaynayn.
Bal qiyaas dal dhan oo aan lahayn gaadiid dab-damis iyo mid gurmad degdeg ah sida uu xaalku noqon karo? Hadda dhowr iyo labaatan sano oo maqnaasho dheer ah kaddib waxaa dib loo howlgeliyay oo si caadi ah u shaqaynaya Waaxdii Dab-damiska iyo Gurmadka degdegga ah ee Maamulka Gobolka Banaadir, inkastoo ay ka mid tahay adeegyada bulshada kuwooda ugu muhiimsan, mar kastana ay tahay in la horumariyo ayaa haddana waaxda intii ay dib u howlgashay waxay gaartay horumar muuqda oo laga dareemay Gobolka Banaadir.
Madaxa Dab-damiska iyo Gurmadka Degdegga ah ee Maamulka Gobolka Banaadir, Cabdullaahi Maxamed Cabdulle (Saney) ayaa u sheegay Wargeyska Xaqiiqa in ay waaxdu sameysay tan iyo markii dib loo hawlgaliyay waxyaabo badan oo la taaban karo.
Wuxuu sheegay in ay tahay meelaha laf-dhabarka u ahaa adeegyada bulshada ee uu bixiyo Maamulka Gobolka Banaadir, iyadoo qabata adeegyada loogu baahida badan yahay, mar kastana u baahan in la horumariyo, maadaama ay bulshada u hayaan adeegyo muhiim ah oo aan la dhayalsan karin.
“Dhowr iyo labaatan sano kaddib waxaa suurtagashay in mar kale dib loo soo nooleeyo Waaxda Dab-damiska iyo Gurmadka Degdegga ah oo aan muddo shaqaynin laga soo billaabo 1991-kii. Haddana sidaas oo ay tahay waaxdu waxa ay muddo yar ku sameysay horumar la taaban karo” ayuu yiri Agaasimaha Waaxda Dab-damiska.
Wuxuu intaa ku daray in ay waaxdu leedahay shaqaale xirfad sare iyo khibrad u leh howlaha dab-damiska iyo gurmadka degdegga ah. Shaqaalaha waaxda waxay haystaan tababarro sare oo ku saabsan hababka dab-damiska nooc kasta oo ay yihiin.
Agaasime Saney ayaa yiri “Shaqaalaha waxaa loo tababaray habka loo damiyo dabka marka uu dhaco iyo sida loo badbaadiyo dadka marka ay qabsato xaalad degdeg ah oo u baahan gurmad sida marka qarax meel uu ka dhaco, ama uu dab qabsado xaafad ama suuq.”
Agaasimaha ayaa tilmaamay in ay waaxdiisu higsanayso in 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir ay mid walba hesho gaari dab-damis ah iyo ambalaas u gaar ah si looga baxo culeyska iyo baahida ka jirta guud ahaan magaalada Muqdisho. “Xitaa aragtideyda mustaqbalka ee waaxdan waa in la helo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dabka damiya oo ka howlgala Muqdisho, maadaama si fudud ay mar walba dabka kaca u damin karaan. Tusaale ahaan haddii Xamarjabab iyo Waaberi oo kale uu dab ka kaco waxaa loo baahanayaa diyaarad kor ka rushaysa oo dabka ka damisa ileen gaariga dab damiska ah meelo uusan gali karin ama gaari karin ayaa jira sida dabaqyada dhaadheer” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Caqabadaha ay la kulmaan:
Caqabadaha ugu waaweyn ee heysta ayuu Saney ku sheegay in ay yihiin in shacabka iyo dowladduba aysan fahamsanayn jiritaanka iyo macnaha uu dab-damiska ugu fadhiyo bulshada. Shacabka iyo ganacsatada waxay u haystaan in ay tahay hay’ad gaar loo leeyahay oo uma haystaan inay tahay hanti dadka ka wada dhaxeysa. Dadka kuma baraarugsana waxa u yahay dab-damiska iyo shaqada aan shacabka u hayno.
Caqabadaha kale ee haysta ayuu ku tilmaamay in ay ka mid tahay wadashaqeyn la’aan ka haysata dhanka hay’adaha amniga iyo Booliska marka ay ku guda jiraan howlaha dab-damiska iyo badbaadinta shacabka, mararkaas oo ay dhacdo in waddooyinka laga xirto.
Dhacdadii ugu xumayd ee na qabsata waxay ahayd xilli aan isbitaal ula carareynay haweenay dhiig baxaysa in ay ciidamadu waddada ka xirteen oo ambalaastii ay dhiigbax ugu dhex dhimatay. Marka laguma baraarugsana waxa uu yahay gurmadka degdegga ah. Mararka qaar waxaan waddada loo furayn gaarigii ambalaaska ahaa ama dab-damiska ahaa halka mid ay labo askari korka ka saaran yihiin loo furayo, kii dhaawac ama qof dhiig baxaya wadana la celinayo.
“Dhacdooyinka wax ka mid ah in Madaxtooyada agteeda guri uu dab ka kacay oo dab-damiskii u socday waddada lagu celiyay” ayuu yiri Agaasmaha.
Wuxuu sidoo kale noo sheegay in ay waaxdu howlgelisay telefoon uu lambarkiisu fudud yahay oo laga wici karo marka dab uu kaco ama gurmad caafimaad oo degdeg ah loo baahdo.
“Dadka waxay nagala soo xiriiri karaan telefoonka uu lambarkiisu yahay (997), si aan gurmad degdeg ah u siinno” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
Waaxda Dab-damiska iyo Gurmadka Degdegga ah waxay hadda ku howlgashaa saddex gaadiidka dab-damiska ah iyo saddex ambalaas, kuwaas oo aan dabooli karin baahida dhanka dab-damiska iyo gurmadka caafimaadka ah ee ka jirta magaalada Muqdisho.
W.Q: Aadan Daahir (Suxeyfa)
Previous articleMaareynta Walwalka
Next articleCaddadka 16-aad ee Xaqiiqa Times